Harleen Dorka Zvinyorwa pamusoro Martech Zone
Zvinyorwa na Harleen Dorka
Harleen Dorka munyori ane ruzivo zvemukati anotarisa zvakanyanya pamisoro ine chekuita nedhijitari nzira dzekutaurirana nekushandisa. Ane hunyanzvi hwekuunza pfungwa dzehutungamiriri nemafungiro kuhupenyu mune rakanyorwa izwi nekugadzira zvakarongedzwa uye zvakatsvagiswa maficha emhando dzakasiyana dzinosanganisira: kushambadzira uye zvemagariro midhiya, maitiro evatengi, hunyanzvi hwetekinoroji, kutengesa uye kushambadzira pamwe nezvimwe zvakawanda. zvikamu.
China, Gumiguru 29, 2020 Muvhuro, Ndira 18, 2021 Harleen Dorka
Iwe unosangana nehukama hwemagariro enhau ane yakakwira kupfuura avhareji vateveri kuverenga, zviuru zvekuda, uye yapfuura brand yekudyidzana ruzivo - hunyengeri kana kurapa? Nenhamba yekushambadzira kushambadzira mishandirapamwe ichiramba ichikwira, hazvisi zvakajairika kuti mabrands awire mukunyengerwa kwemaakaunzi akadaro nevateveri venhema uye vateereri vechokwadi. Sekureva kweiyo Influencer Yekushambadzira Hub: Influencer kushambadzira kunoiswa kuti ikure kusvika ingangoita $ 9.7B mu2020.